ZEC Archives - iHarare News
Chigumba reunites with ex hubby after 20 years ZEC boss Priscilla Chigumba is reported to have reunited with her ex husband Mac Chigumba after 20 years of separation. The ZEC boss was once accused by Edmund Kudzayi aka Baba Jukwa…
PIC: ZEC boss Priscilla Chigumba pregnant
Priscilla Chigumba pregnant ZEC boss Priscilla Chigumba is definitely spotting a baby bump and it looks really good on her. Chigumba who has been away from the limelight definitely dropped a few jaws when she recently appeared rocking…
PIC:ZEC mourns Mtukudzi in ‘All Black’ attire
ZEC mourn Mtukudzi The country's electoral body ZEC has joined the nation in mourning legendary musician Oliver Mtukudzi who passed away on Wednesday after a battle with diabetes. The ZEC team, clad in all black posted their…
Chigumba testifies in court The Zimbabwe Electoral Commission Boss, Priscilla will be appearing in court as a witness to testify against Night Tawona Shadaya who is answering to charges of criminal insult. The trial was set to…
Zim Twitter celeb lands in’ jail’ over controversial Chigumba retweet
Controversial Chigumba tweet Twitter 'influencer' Tawona Shadaya (25) was arrested and dragged to court yesterday for retweeting a message purported to be from ZEC boss Justice Priscilla Chigumba in the aftermath of the elections.…